ICM Single Subject Diploma in Accounting Management
End Date : TBC
Class Code : SFU-ICM-ACC-04-01 (Online)
Lecturer : Daw Khin Nwe Ohn - M.Com, B.Com (Hons, YIE),
ICM Single Subject Diploma in Accounting Management Online အတန်းဖေဖော်ဝါရီလ တန်းခွဲသစ်အတွက် အပ်နှံနိုင်ပါပြီ။
Institute of Commercial Management (ICM) ဆိုတာဘာလဲ?
The Institute of Commercial Management သည် ယူကေနိုင်ငံတွင် သင်ကြားနေသော Qualifications များ၏ အရည်အသွေးကို စီစစ်သော အစိုးရဌာနတစ်ခုဖြစ်သည့် Ofqual (UK) မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ စတင်တည်ထောင်ထားသော သက်တမ်း နှစ် (၄၀) ရှိ Education Charity တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ICM ၏ Single Subject Diploma များသည် Career Development အတွက် လိုအပ်သော ဘာသာရပ်များကိုသာ ရွေးချယ် သင်ယူနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ထားသော Micro-credential သင်တန်းများဖြစ်ပြီး Ofqual မှ ကြီးကြပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ICM Single Subject Diploma စာမေးပွဲများကို နိုင်ငံတကာနှင့် တပြေးညီ ICM (UK) မှ ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးပြီး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို ထုတ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
Strategy First သည် ၂၀၁၀ မှ စတင်၍ ICM အတန်းများကို သင်ကြားပေးနေသော Approved Centre ဖြစ်ပါသည်။
ICM Single Subject Diploma in Accounting Management ဘာသာရပ်တွင် အသေးစိတ်သင်ကြားရမည့် ခေါင်းစဉ်များ
I. Financial Resources and Business Planning
II. The Construction of Financial Statements
Accounts of clubs and societies
ICM စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုအောင်မြင်ပါက Institute of Commercial Management (ICM, UK) မှ ပေးအပ်သော Single Subject Diploma ရရှိပါမည်။
“သင်ခန်းစာများကို Online သီးသန့်ဖြင့် သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။”
၁။ ဆရာကြီး၊ဆရာမကြီးများမှကြိုတင်ရိုက်ကူးထားသော သင်ခန်းစာဗီဒီယိုများကို Moodle application တွင် လေ့လာရမည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများ နှင့် သင်တန်းကြေး အသေးစိတ်
မူရင်းသင်တန်းကြေး - ၃၉၅,၀၀၀ ကျပ်
ယခု online သင်တန်းကြေး -
1. ICM Single Subject Diploma in Business Management & Administration - သင်တန်းကြေး - ၂၄၅, ၀၀၀ ကျပ် + Textbook Fees
2. ICM Single Subject Diploma in Human Resources Management - သင်တန်းကြေး - ၂၄၅, ၀၀၀ ကျပ် + Textbook Fees
3. ICM Single Subject Diploma in Project Management - သင်တန်းကြေး - ၂၄၅, ၀၀၀ ကျပ် + Textbook Fees
4. ICM Single Subject Diploma in Marketing Management - သင်တန်းကြေး - ၂၉၅, ၀၀၀ ကျပ် + Textbook Fees
5. ICM Single Subject Diploma in Customer Service - သင်တန်းကြေး - ၁၈၉, ၅၀၀ ကျပ် + Textbook Fees
ICM Single Subject Diploma တစ်ခုအတွက်တစ်ပတ်ကို (၁) ရက်တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီး သင်ယူမှုကာလ (၃) လကြာမြင့်ပါမည်။
Exam Fees – 110 USD နှင့်ညီမျှသောမြန်မာငွေကျပ်။
ပညာအရည်အချင်း (၁၀)တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ (သို့မဟုတ်) ဘွဲ့တခုခုရပြီးသူ ဖြစ်ရပါမည်။
ICM UK စာမေးပွဲ ဖြေရမည့်ပုံစံ
Remote Assessment ဖြင့်ဖြေဆိုရပါမည်။
Remote Assessment ဆိုသည်မှာ စာမေးပွဲမေးခွန်းများရရှိပါက မိမိတို့နေအိမ်မှ Online ဖြင့် Assignment ပုံစံ ဖြေဆိုရပါမည်။
*သင်တန်းကြေးများကို အရစ်ကျ (၂)ကြိမ် အရစ်ကျခွဲသွင်းနိုင်ပါသည်။
‎ သို့ ဆက်သွယ် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Strategy First Education Head Office - အမှတ်(9A)၊ ဗဟိုလမ်း၊ သံတံတားရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။